05/28/14 ~ Myanmar Forward
ကျောင်းသားများ ရည်းစားမထားရ အခြေခံကျောင်းများတွင် စည်းကမ်းချက်ထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
၂၀၁၃-၂၀၁၄ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထွက်လာကြသည့် အ.ထ.က(၁) ဒဂုံမှ စည်းကမ်းလိုက်နာကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-ရဲနောင်(ဖယ်ခုံ)
ရန်ကုန်၊ မေ ၂၇- ယခုနှစ်ကျောင်း ဖွင့်ရာသီတွင် တက်ရောက်ကြမည့် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ရည်း စားမထားရဆိုသည့် စည်းကမ်းသတ် မှတ်ချက်များအပါအဝင် အခြားသော စည်းကမ်းသစ်များကို အခြေခံကျောင်း များတွင် တင်းကျပ်စွာ ထုတ်ပြန် ထား ကြောင်းသိရသည်။
လက်ရှိကျောင်းအပ်ရန် ရောက် ရှိလာကြသည့်ကျောင်းသားများကို လည်း ဆံပင်ဆေးဆိုးလာပါ က ကျောင်းအပ်လက် ခံခြင်းကိုပြုလုပ် ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း အမှတ်(၃)အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အခြေခံပညာကျောင်းများအ နေဖြင့်ယခင်နှစ်က ကျောင်းသားများ ကိုဖုန်းကိုင်ဆောင် အသုံးပြုခွင့်မပေး ခဲ့သော် လည်း ကျောင်းသား အချို့ ကိုင် ဆောင်ခဲ့ကြသဖြင့် ယခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်း သို့လက်ကိုင်ဖုန်းများ လုံးဝယူဆောင် လာခြင်းမပြုရန်၊ ရည်းစားမထားကြ ရန်၊ ကျောင်းသားတိုင်း ကျောင်း ခေါ်ကြိမ် ၇၅ရာခိုင်နှုန်း ပြည့်မီရန် လည်း စည်းကမ်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၅)၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း မှ သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဗဟန်း မြို့နယ် အမှတ်(၂)အခြေခံပညာအ ထက်တန်းကျောင်းမှ ဆရာမတစ် ဦးဖြစ်သူဒေါ်မျိုးသီရိ (အမည်လွှဲ) က ''ကျောင်းသား ဆံပင်ဆေးဆိုး လာရင် ကျောင်းအပ်လက်မခံပေး ဘူး။ ပြန်လွှတ်တယ်။ ကျောင်းစည်း ကမ်းထဲမှာ တစ်ခါတည်း ပါပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားကျောင်းတွေလဲ ဒီလိုပဲ''ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ စည်းကမ်းများအနက် တချို့စည်းကမ်းချက်များမှာ ယ မန်နှစ်များကတည်းက ထုတ်ပြန်ထား ခြင်းဖြစ်သော်လည်း လိုက်နာမှုအား နည်းကြသည့်အပြင် စည်းကမ်းဖောက် ဖျက်သည့် ကျောင်းသား များကို အ ပြစ်ပေးအရေးယူရာတွင်လည်း ထိ ရောက်မှုမရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ယခုစာ သင်နှစ်တွင်ထပ်မံ၍ တင်းကျပ်စွာ ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၃-၂၀၁၄ တက္ကသိုလ် ဝင်စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထွက်လာကြသည့် အ.ထ.က(၁) ဒဂုံမှ စည်းကမ်းလိုက်နာကြသည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ ကို တွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ-ရဲနောင်(ဖယ်ခုံ)
''အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ စည်းကမ်းသာထုတ်ထားတာ ဖုန်းတွေ ကို မိဘကလဲ ပေးလိုက်တယ်။ ကျောင်းသားကလဲ ယူလာတယ်။ ကျောင်းကလဲ အားလုံးကိုလိုက်မစစ်နိုင်ဘူး။ ဒီနှစ် ကတော့ တစ်ကြိမ်ဆိုသတိပေးမယ်။ နှစ်ကြိမ်ဆို သိမ်းမယ်။ ပြီးရင်မိဘ ခေါ်ခံဝန်ကတိထိုးခိုင်းမယ်''ဟု အ ထက်ပါဆရာမက ဆက်လက်ပြော သည်။
လသာမြို့နယ် အမှတ်(၂)အ ခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ထားသည့် ကျောင်း စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာကြရန် ကျောင်း သားများ ကို သတိပေးထား ပြီးဖြစ်ကာ ယင်းကဲ့သို့ကျောင်း အပ်စဉ် ဆံပင်ဆေးဆိုးလာခြင်းကို အတန်း ကြီးကျောင်းသားများတွင် မတွေ့ရ သော်လည်ွးုတန်းမှ ကျောင်း သားအသစ်များ တွင်တွေ့ရ ၍ ဆေးပြန်ဆိုး ခိုင်းနေရသည်ဟု ပြောသည်။
ကျောင်းစည်းကမ်းချက်များ သည် ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ နှင့်အတူပူးတွဲပါရှိပြီး ကျောင်းအပ် လက်ခံချိန်၌ ကျောင်း သားနှင့် ကျောင်း သားမိဘကို ဖတ်ရှုခိုင်းပြီး လိုက်နာ ရန်အသိပေးထား ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အ ခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် ဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ထုတ်ပြန်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းအပြင် ကျောင်းသား မိဘများအနေဖြင့်လည်း ကျောင်းကြို၊ ပို့ ချိန်များတွင် သရုပ်ပျက်အဝတ်အစား များမဝတ်ဆင်ကြရန် သတိပေးထား ကြောင်း အဆိုပါဦးစီးဌာနမှ ညွှန် ကြားရေးမှူး တစ်ဦးက ပြောသည်။
တချို့သော ကျောင်းသားမိခင် များသည် ကျောင်းလာပို့ချိန်၊ ကြိုချိန် များ၌ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ အတုယူမှားစေနိုင်သော အမြင်မတင့် တယ်သည့် ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုး များအား တွေ့ရှိနေရ သည့် အတွက် ယင်းသို့သတိပေးထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
''ကျောင်းကို ကျောင်းနဲ့တူ အောင်၊ ကျောင်းသားကိုကျောင်းသား နဲ့တူအောင် စည်းကမ်းတွေကိုတင်း ကျပ်စွာထုတ်ပြန် ထားပါ တယ်။ တချို့ ကျောင်းသားမိဘတွေဆိုရင် မတော် တရော်တွေ ဝတ်လာကြလို့ကျောင်း သားတွေတင်မကဘဲ ကျောင်းသား မိဘတွေ ကိုပါ သတိပေးနေရတယ်''ဟုအဆိုပါ ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြော သည်။
သားသမီးများ ကို ကျောင်းပို့၊ကျောင်းကြိုပြုလုပ်ကြသည့် မိဘများ နှင့်အုပ်ထိန်းသူများကို လည်း ကျောင်း နှင့်ဝန်းကျင်တွင် အမြင်မတင့်တယ် စေသော မြန်မာ့ရိုးရာဝတ်စားဆင် ယင်မှုနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော၊ ဘောင်း ဘီအတို၊အရှည်နှင့် စကတ်အတို များ ဝတ်ဆင်မှုများရှိနေ၍ သတိပေး၊ တားမြစ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြရ ကြောင်းသိရသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ,မြန်မာနယ်စပ်သတင်းများ | No comments
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောနယ်စပ်မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ သွေးစည်းညီညွတ်ရေး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (RSO) ကလို့ ယူဆရတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မောင်တောမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဦးဌေးလွင်က DVB ကို အတည်ပြု ပြောပါတယ်။
မောင်တော-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် မိုင်တိုင် ၅၂ အနီးမှာ ဒီနေ့မနက် ၉ နာရီလောက်က ပြောက်ကျား ၀တ်စုံဝတ်ထားတဲ့ RSO တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးနဲ့ ကင်းလှည့်နေတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်စိတ်တစိတ်တို့ ထိတွေ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ပြောပါတယ်။
“RSO လို့ပဲ ယူဆတာပေါ့နော်။ ယူနီဖောင်းနဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ယောက်က ခြံစည်းရိုးနား ကပ်လာတယ်။ ကပ်လာတော့ လှုပ်ရှားတပ်စိတ်တစိတ်နဲ့တွေ့တယ်။ တွေ့ပြီးမှ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်တယ်။ ကြာတော့ မကြာပါဘူး။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပဲ ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟိုဘက် တယောက်သေတယ်လို့ သိရပါတယ်။”
ဒီတကြိမ်နဲ့ဆို မောင်တောနယ်စပ်မှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာ ၃ ကြိမ် ရှိသွားပြီလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၇ ရက်ကလည်း ဒီ မိုင်တိုင် ၅၂ အနီးမှာပဲ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နယ်ခြားစောင့်ရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဒီ့မတိုင်မီ မေလ ၁၃ ရက်မှာ နယ်စပ်မိုင်တိုင် ၃၉ အနီးမှာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး RSO တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ ဦး သေဆုံး၊ ၁ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့တာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်စပ်မှာ အခုလို တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားလာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတပြောခွင့်ရ ဦးရဲထွဋ်ကို မေလ ၂၂ ရက်က ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြား ကော်မတီချင်း အရင် ဆွေးနွေးမယ်။ မရရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်အထိတော့ နှစ်နိုင်ငံနယ်ခြားကော်မတီ စည်းဝေးပွဲသတင်း ထွက်ပေါ်လာတာ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under ပြည်ပရောက်မြန်မာသတင်းများ | No comments
မြန်မာအလုပ်သမား ၆ ဦးကို ရောင်းစားခဲ့တဲ့ လူပွဲစားကို ဖမ်းဆီး အရေးယူနိုင်ရေးနဲ့ လွတ်မြောက် လာသူတွေကို ကူညီနိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို အကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး အလုပ်သမားသံအရာရှိ ဦးသိန်းနိုင်က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ပါကစ္စတန်မှာ တာလီဘန် အဖွဲ့ခွဲတစ်ခု ခွဲထွက်လာ
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
Hakimullah Mehsud ပြီးခဲ့တဲ့
အုပ်စုတွင်း တိုက်ခိုက်မှုတွေ တိုးလာ
ပါကစ္စတန် နိုင်ငံမှာ တာလီဘန်တွေ ဖွဲ့ထားတဲ့ တပ်ပေါင်းစုထဲက အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုဟာ တပ်ပေါင်းစုကနေ ခွဲထွက်လိုက်ပြီလို့ အဲဒီ အဖွဲ့ခွဲရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ပြောပါတယ်။
TTP လို့ ခေါ်တဲ့ အဲဒီ တပ်ပေါင်းစုထဲကနေ မာဆွတ် Mehsud ဆိုတဲ့ အုပ်စုဟာ ပင်မ အဖွဲ့ကြီးကနေ ခွဲထွက်လိုက်ပြီလို့ မာဆွတ်အဖွဲ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ အဇမ်တားရစ် Azam Tariq က ကြေညာပါတယ်။
ပါကစ္စတန် အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေကြောင့် ခုလို ခွဲထွက်တာ ဖြစ်တယ်လို့ လူမျိုးစုတွေ နေထိုင်ရာ တောင်ပိုင်း ဝါဇီရစ္စတန် ဒေသမှာ အဇမ်တားရစ် က သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ အဖွဲ့က ဆွေးနွေးမှုတွေကို ထောက်ခံပြီး တာလီဘန် ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လိုတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့ဟာ ဓားပြတိုက်တာ၊ ပြန်ပေးဆွဲ ငွေတောင်းတာတွေ လုပ်တဲ့ ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း တစ်ခု ဖြစ်လာနေပြီလို့လည်း အဇမ်တားရစ်က စွပ်စွဲပါတယ်။
အရုပ်ဟု တံဆိပ်ကပ်ထားပြီး နိုင်ငံဖြတ်သန်း ချောပို့ဖြင့် ပြန်ရောက်လာသော သေတ္တာအတွင်းမှ ဂျပန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အလောင်း
တိုကျို- ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ စုံထောက်များသည် နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းပြီး ချောပို့စနစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ဂျပန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အလောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေသည်။
ရီကာအိုကာဒါ (၂၉) နှစ်၏ ရုပ်အလောင်းကို ‘‘အရုပ်’’ ဟု တံဆိပ်ကပ်ထားသည့် နှစ်မီတာအရှည်ရှိသော သော့ခတ်ထားသည့် သေတ္တာတစ်လုံးဖြင့် စာတိုက်မှပေးပို့လိုက်သည်ကို တိုကျိုအနောက်ဘက်ရှိ ၎င်းနေထိုင်ရာ ဟာချီအိုဂျီစီးတီးတွင် ရဲက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အိုကာဒါသည် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လကပင် ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီး ၎င်း၏ အလောင်းထည့်ထားသော သေတ္တာအတွက် အမြန်ချောပို့ခငွေပေးချေမှုကို ၎င်း၏ ခရက်ဒစ်ကတ်ဖြင့်ပင် ပေးချေထားကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အိုကာဒါမပျောက်ဆုံးမီ အချိန်က သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာနေသည့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့် သွားတွေ့ရန်ရှိသည်ဟု ရေးသားထားခဲ့သည်ကို သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့စုံစမ်းရေးသမားများသည် နေအိမ်သို့ ပြန်ရောက်လာသော ၎င်း၏ အလောင်းကို စစ်ဆေးရာတွင် ဓားဒဏ်ရာများစွာ တွေ့ရပြီး လက်များတွင်မူ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ရာမှဖြစ်သော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ မတွေ့ရဟုဆိုသည်။
အိုဆာကာ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း အိုကာဒါ၏ ပတ်စ်ပို့ကို အသုံးပြုကာ တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ ရှန်ဟိုင်းသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာသွားသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြနေမှုကို အတည်ပြုရန် ငြင်းဆန်ထားသည်။
လက်ဖြင့် လိင်ဖျော်ဖြေမှု လွန်ကဲ၍ ဘရာဇီးလ် ဆယ်ကျော်သက် သေဆုံးသွား
ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံမှ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ် တစ်ဦးသည် လက်ဖြင့် လိင်စိတ်ဖြေဖျောက်မှု လွန်ကဲရာမှ အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
၎င်းသည် ပြီးခဲ့သည့်လက တစ်ညအတွင်း လိင်စိတ်ဖြေမှု အကြိမ် ၄၀ မျှ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရကြောင်း ဆရာဝန်များက ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေနှင့် နောက်တစ်နေ့ မနက်လင်းချိန်တွင် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် လူငယ်၏ အလောင်းကို မိခင်ြ ဖစ်သူက အိပ်ခန်းထဲတွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
မိခင်က သူမသည် သားဖြစ်သူ၏ လွန်ကဲသော အခြေအနေကို သိရှိနေသဖြင့် လိင်စွဲလန်းမှု ကုထုံးတစ်ရပ် ခံယူနိုင်စေရန် စီစဉ်နေသော်လည်း နောက်ကျသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။ ထိုလူငယ်၏ အတန်းဖော်များက ၎င်းသည် လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု ပြင်းပြလွန်းပြီး အမျိုးသမီးများကို ပုံသဏ္ဍန်မရွေး၊ အရွယ်မရွေး တောင့်တနေတတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းသည် မိမိလက်ဖြင့် လိင်စိတ်ဖြေနေခြင်းကို Webcamမှတဆင့် ကြည့်ရှုရန် အတန်းဖော်များကို ဖိတ်ခေါ်တတ်သေးကြောင်းလည်း သိရသည်။ ၎င်း၏ အခန်းထဲတွင် အပြာမဂ္ဂဇင်းစာအုပ် အများအပြားကို ရဲများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်သော ရုပ်ပုံများနှင့် ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကိုလည်း ကွန်ပျူတာအတွင်း တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
ကလေးသူငယ် လိင်ကုန်ကူး ရဟန်းဝတ်ဂိုဏ်း ချင်းမိုင်မှာ ဖမ်းမိ
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under သတင်းများ | No comments
ဖမ်းဆီး လူဝတ်လဲခံထားရတဲ့ ချင်းမိုင်နဲ့ လန်းပန်းနယ်က ကလေး လိင်ကုန်ကူး ဂိုဏ်း၊
ဓာတ်ပုံ- ချင်းမိုင် စီးတီးနယူးစ်
ကလေးသူငယ်တွေကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရှာပြီး လူမှောင်ခို ကူးသန်း ရောင်းဝယ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ ထိုင်း နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်နဲ့ လန်းပန်းနယ်က ရဟန်းဝတ် ဂိုဏ်းတခုကို ထိုင်း အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးပြီး လူဝတ်လဲစေကာ တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ ချင်းမိုင်စီးတီးနယူးစ် အွန်လိုင်း သတင်းတပုဒ် မှာ
ချင်းမိုင်နဲ့ လန်းပန်းနယ်က နာမည်ကြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတချို့က ရဟန်းဝတ် ၅ ပါးကို ကလေး သူငယ် လိင်မတရား စော်ကားခံရမှု၊ တရားမ၀င်လူမှောင်ခို ကူးမှုစတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ ဖမ်းဆီတာလို့ သိရပါတယ်။
ယမန်နေ့က အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် လူငယ်လေးတဦးဟာ လိင်မတား ပြုကျင့်ခံရတာကြောင့် ထွက်ပြေး လွတ်မြောက် လာပြီး ရဲက အခုလို ရဟန်းဝတ် ဂိုဏ်းကို ဖမ်းမိတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သတင်းအဆိုအရ အဆိုပါ ကလေးငယ်နဲ့ အတူ အခြား လူငယ်တော်တော်များများဟာ လိင်မတော် မတရားပြုကျင့်ခံရ ဖို့ ရဟန်းဝတ် တော်တော်များများကြားမှာ ရောင်းချခံခဲ့ရတာလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလူငယ်လေးတွေကို အိမ်တအိမ်မှာထားပြီး လိင်မှုပြုကျင့်ခံရဖို့ တကြိမ်ကို ဘတ် ၃၀၀ ကနေ ၅၀၀ ထိ ပေးရပြီး ကိစ္စပြီးတာနဲ့ ထ၀ချိုင်း ဆိုသူ ရဟန်းဝတ် တပါးက ပိုက်ဆံ လိုက်ကောက်ယူတယ် လို့ ဖော်ပြထား ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရဲက ရဟန်းဝတ် ထ၀ချိုင်းဆိုသူ ရဟန်းဝတ်ကို ဖမ်းဆီးပြီး စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်အရ လိင်ကိစ္စ လုပ်ကိုင်နေ တဲ့ ဂိုဏ်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် ရဟန်းဝတ် ၄ ပါးကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ရဲ့အရာရှိကြီး က ပြော ထားပါတယ်။
အဲဒီထဲက ဘုန်းကြီးတပါးကိုတော့ ညစ်ညမ်း ဗွီဒီယိုခွေတွေ၊ လိင်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်း ကိရိယာတွေ၊ ပါတီပွဲတွေ မှာ သုံးတဲ့ ဒစ္စကို မီးတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရဲအရာရှိကြီး ဒမ်ရွန်ဆပ် ဂီထိရပွန်က အခု လို ကိစ္စကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားမိကြောင်း ပြောဆိုထားပါတယ်။
အာဂျင်တီးနားတွင် ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် ပျက်ကျ၊ ၅ ဦး သေဆုံး
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ရီယိုဒီလာပလာတာမြို့မှာ လူ ၉ ဦးကို တင်လာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် ၁ စီး မေ ၂၇ ရက်နေ့က ပျက်ကျခဲ့လို့ လူ ၅ ဦး သေဆုံးပါတယ်။
ဥရုဂွေးနုိုင်ငံ ကာမယ်လိုမြို့ကို ပျံသန်းဖို့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ စန်ဖာနန်ဒိုမြို့ကနေ ပျံတက်နေတုန်း ဒေသစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီလောက်က ပျက်ကျခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Argintinaအာဂျင်တီးနား လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဆာဂီဘာနီကတော့ ပျက်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်း စစ်ဆေးနေတုန်းပဲလို့ ပြောပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေကတော့ အင်ဂျင်ပျက်တာနဲ့ မြူတွေကြောင့် မြင်နိုင်စွမ်းကျဆင်းတာ ၂ ခု ပေါင်းတယ်လို့ သံသယ ရှိနေပါတယ်။
လေယာဉ်အမြီးဖြစ်ပုံကို ကြည့်ပြီး လေယာဉ်က ခေါင်းနဲ့ စိုက်ကျတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လုံခြုံရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
“လမ်းမှာ ဘာမှ မမြင်ရလောက် အောင် မြူထူတဲ့ နေရာ ၃ ခုလဲ ရှိသေးတယ်။ အင်ဂျင်ပျက်တာလည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေ အားလုံးက ထင်မြင်ချက်တွေပဲ ဖြစ်နေသေးတယ်။ အတွေ့အကြုံအရ အင်ဂျင်ပျက်လို့ဆင်းဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ မြူထူတွေကြောင့် မြစ်ကို ကောင်းကောင်း မမြင်နိုင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။”
ရှင်သန်ကျန်ရစ်သူ ၂ ယောက်ကတော့ အသေးစားဒဏ်ရာတွေနဲ့ စန်ဖာနန်ဒိုဆေးရုံကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး တခြား ၂ ယောက်ကတော့ ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ ဥရုဂွေးနုိုင်ငံ ကိုလိုနီယာ ဆေးရုံကို တင်ပို့ထားရပါတယ်။
လေယာဉ်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်၊ ကိုစီယူကို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်သူ ဖေဒေရိကို ဘိုနိုမီကတော့ လေယာဉ်ဟာ အသစ်ဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းအဆင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဂီတအလုပ်တွေအပြင် MRTV 4က ရိုက်မဲ့ Musical Drama ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဦးမယ့် ၀ိုင်းလေး
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under အနုပညာ | No comments
အိပ်မက်ဆုံရာ အစီအစဉ်မှ စတင်ကာ ဂီတလောကထဲ ၀င်ရောက်လာပြီး လက်ရှိမှာ တစ်ကိုယ်တော်ခွေ အပြင် ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုလဲရိုက်ဖို့ ရှိနေတာကြောင့် သူမရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း မေးကြည့်တဲ့ အခါ “သုံးယောက်ခွေ မထွက်ခင်ကတည်းက ဒီအခွေကိုလုပ်နေတာ။ အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ သီချင်းက ၈ပုဒ် တီးပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ၈ပုဒ်ထဲက အားမရလို့ ၀ိုင်းလေးက အသစ်ပြန် တီးနေတာ ဆိုတော့ အခု သီချင်း အပုဒ်၂၀ကျော်ကတည်းက ၇ပုဒ်တော့ ပြီးသွားပြီ။ မှန်းထားတာကတော့ သြဂုတ် ၈လပိုင်း ၃ ရက်နေ့မှာ ထွက်ဖို့စဉ်းစားထားတာ။ ဒါပေမဲ့ မိုးတွင်းရယ်၊ ပရိသတ် အခိုင်အမာ မရသေး တာကြောင့်ရယ်။ ရက်နောက်ဆုတ်ပြီး စက်တင်ဘာ၊ အောက်တိုဘာလောက်တော့ မှန်းထားတယ်။ အခွေထဲမှာ က R&B dance လေးတွေပါမယ်။ popလေးတွေပါမယ်။ တေးရေးတွေက တော့ ဆရာမြင့် မိုးအောင်၊ ဆရာနောင်နောင်(ဆန်းဖလားဝါး)၊ ကိုပိ၊ စောဖြိုးဝေကျော်။ G3 က ကိုသားစိုးပါတယ်။ ၀ိုင်းလေး ကိုယ်တိုင်လဲပါ မယ်။ သီချင်းက တစ်ကိုယ်တော်ဆိုတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့။ အသည်းကွဲ သီချင်းတွေ လဲပါမယ်။ အချစ်သီချင်းလေးတွေလဲ ပါမယ်။ ဘ၀အကြောင်းလေးတွေလဲပါမယ်။ နောက်ထူးခြားတာက ၀ိုင်းလေးရေး ထားတဲ့ အဖေ့မေတ္တာအကြောင်း ရေးထားတဲ့ သီချင်းပေါ့။ အများကတော့ အမေအတွက် ရေးတာများ တယ်။ ၀ိုင်းလေး ကိုယ်တိုင်ကတော့ အဖေ့မေတ္တာသီချင်းလေးကို ထည့်ထားတာပေါ့။”လို့ သူမက ပြောပါ တယ်။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူမက “MRTV4ကနေ musical drama ရိုက်ဖို့အတွက် အိပ်မက်ဆုံရာက ၁၀ယောက်ပါမယ်ပေါ့။ ၀ိုင်းလေး ၊ ဟန်ထူးဈာန်၊ နန့်ချစ်၊ အောင်မြင့်မြတ်၊ ထင်တိုင်း၊ ယမုံဝေဦးခင်၊ ရတနာဝိုင်း၊ နန်းထက်ထက်သူ၊ ထွန်းပြည့်အောင်တို့ပေါ့။ ၀ိုင်းလေးလဲ သိပ်မမှတ်မိလို့။ ရိုက်မှာက music အကြောင်းပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်နေရာစီက လာပြီးတော့ ဂီတ၀ါသနာပါတဲ့အခါမှာ ပြိုင်ပွဲသွားပြိုင်ကြတယ်။ အခက်အခဲတွေ တွေ့ရတယ်ပေါ့။ အဲလိုပုံစံလေးလောက်ပဲ သိထားတယ်။ အတိအကျတော့ မသိသေးဘူး။ ရှေ့လ စရိုက်မယ်လို့တော့ ပြောထားတယ်။ သေချာတာက ၀ိုင်းလေးက အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တာပါ။ သရုပ်ဆောင်ကတော့ အနုပညာတစ်ခုအနေနဲ့ ကြိုးစားသင့်တယ်ထင်လို့ရိုက်ဖို့ လက်ခံဖြစ်တာပါ”တဲ့။
Koreaမီးကို အမြန်ငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သက်ကြီးလူနာတွေက လမ်းမလျှောက်နိုင်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် မလှုပ်ရှားနိုင်လို့ သေဆုံးမှု များခဲ့တာလို့ မီးသတ်အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဒီနှစ်အတွက် Miss Asia Pacific World ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ မြန်မာပြည်ကိုယ်စားပြုအလှမယ် မေမြတ်နိုးကအနည်းဆုံး ဆုတခု ဆွတ်ခူးဖွယ် ရှိနေပါပြီ။
မဲ တသိန်းကျော် ကိုယ်စီ ရနေတဲ့ မြန်မာနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က ထိပ်ဆုံးမှာ ရောက်နေပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်အင်တာနက်သမားတွေ အခုထက် ပိုပြီး တက်ကြွကြမယ် ဆိုရင်တော့ ဖိလစ်ပိုင်အလှမယ်က မေမြတ်နိုးကို အနိုင်ရသွားနိုင်ချေ ရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့် မေမြတ်နိုးပရိသတ်တချို့ကလည်း မြန်မာအလှမယ်ကို အားပေးဖို့ အွန်လိုင်းမှာ လှုံ့ဆော်နေတာပါ။
မေမြတ်နိုးက ပြိုင်ပွဲမြေကို ခြေမချခင်ကတည်းက အင်တာနက်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကို ရနေသူပါ။
မဲပေးနိုင်တဲ့ လင့်ကတော့... https://www.facebook.com/missosology.info/app_376474729030486
မဲပေးလိုသူ ပထမဆုံး လုပ်ရမှာကတော့ ပြိုင်ပွဲကော်မတီရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကို like လုပ်ရခြင်းပါ။
အဲဒါက အဆင့် ၁။
အဆင့် ၂ ကို ဆက်သွားမယ် ဆိုရင်တော့... okay ကို ကလစ်ရပါမယ်။ ကိုယ့်ဖေ့စ်ဘုတ်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေများရဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာတွေကို ကော်မတီက ရယူနိုင်ပါမယ်။ (အဲဒါကို သဘောမတူရင် cancel ကိုနှိပ်ပြီး မဲပေးမယ့်အစီအစဉ်ကို ရုပ်သိမ်းရုံသာ။)
အဆင့် ၃ ကတော့ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ မိန်းမလှကို မဲပေးဖို့ပါ။
Step 2: Give the App Permissions, Click here Grant Permission to App (you need to do this just once)
Step3: Vote for your favorite girl!
တယောက်ထက် ပိုပြီး မဲထည့်အားပေးနိုင်တယ်။
တရက်ကို ငါးယောက်အထိ ပေးလို့ရကြောင်း သူတို့က စည်းကမ်းချက် သတ်မှတ်ထားတာပါ။
မဲရုံပိတ်တဲ့ စနေနေ့အထိ မဲပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ... အနိုင်အရှုံးက အွန်လိုင်းစာဖတ်သူများလက်ထဲမှာ အများကြီး ရှိနေပါကြောင်း။
ဗန်းမောက်မြို့နယ် နောင်ကွတ်ကျေးရွာတွင် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး လူ ၁၅၈ ဦး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under မှုခင်း,ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်တွင် အဘွားအိုနှင့် ကလေးငယ်တစ်ဦးနေထိုင်နေသည့်အိမ်မှ မီးစတင် လောင်ကျွမ်းရာ လူနေအိမ် ၂၂ လုံး မီးထဲပါသွားပြီး ဒေသခံ ၁၅၈ဦး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ဗန်းမောက်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
မေလ ၂၅ ရက် နံနက်က ဗန်းမောက်မြို့နယ်၊ နောင်ကန် အုပ်စု၊ နောင်ကွတ်ကျေးရွာတွင် မီးလောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အသက် (၈၃) နှစ်အရွယ် အဘွားအိုနှင့်ခြောက်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးတို့ နေထိုင်သည့်အိမ်မှ စတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ် ကြောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးပြည့်ဖြိုးငြိမ်းကပြောသည်။
‘‘ညဘက်မှာ မီးဖိုသုံးပြီး မငြှိမ်းမိဘဲ အိပ်ကြတာ။ အဘွား အိုကြီးနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ပဲရှိ တော့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ ရာသီဥ တုကလည်း ပူနေတော့ အနားက အိမ်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ မီးကူးသွားတာ’’ဟု ဦးပြည့်ဖြိုး ငြိမ်းကပြောသည်။
မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်များတွင် ပေါ့ဆမီးကြောင့် အများဆုံးဖြစ် ပြီး နောင်ကွတ်ကျေးရွာမီးလောင် ဆုံးရှုံးမှုမှာ ကျပ်သိန်း ငါးဆယ် ကြောင်း ဗန်းမောက်မြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ မီးဘေးသင့်သူများအား ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းတွင် ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်ပေးထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မီးစတင်လောင်သည့်အိမ်မှ အဘွားအိုနှင့် ကလေးငယ်ကို အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာသားများက ကယ်ထုတ်ခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာရသူတစ်ဦးမျှမရရှိခဲ့ကြောင်း မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးမှ စာရေးကြီးက ပြောသည်။
စဉ့်ကိုင်မှာ အလုပ်သမား ၆၀၀ ကို အလုပ်ပြန်ခန့်ပေးဖို့ တောင်းဆို
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ဘယ်လင်းကျေးရွာ မှာရှိတဲ့ "ကံကောင်းခြင်းရတနာ" သစ် အချော ထည် စက်ရုံက အလုပ်သမားခြောက်ရာလောက်ကို အလုပ်ပြန်ခန့်ပေးဖို့ ဒီနေ့ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်တွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်မြောင်းမြို့နယ်၊ မဂ္ဂင်လမ်းမှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းမှာကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ အဲဒီစက်ရုံက အလုပ်သမားတွေကိုယ်စား အလုပ်သမ မသက်နွယ်အောင်က အခုလို တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
"သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရှင်းရခြင်းက ဒီအလုပ်ကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပြန်ဝင်ချင်တယ်၊ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ သွားချင်တယ်၊ အလုပ်ဆင်းမခံလို့ ဒုက္ခသည်စခန်းဖွင့်ထားတာ စားရေးသောက်ရေး အဆင်မပြေဘူး"
ကံကောင်းခြင်းရတနာ သစ်အချောထည်စက်ရုံက အလုပ်သမား ခြောက်ရာနီးပါးလောက်ကို အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားသဘောတူစာချုပ် မချုပ်လို့ဆိုပြီး အလုပ်ထုတ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ အလုပ်သမားတွေဟာ စက်ရုံအနီးက ရှမ်းကန်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်က အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က တင်ပြထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under ဗဟုသုတ | No comments
၁။ ။ ညအချိန်မှာ ဓါတ်လှေကားနဲ့ အထပ်မြင့် အဆောက်အဦကို လူစိမ်းယောကျာ်းတစ်ဦးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း တူတူတက်ရဖို့ အခြေအနေကြုံလာခဲ့မယ်ဆိုရင်…
လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ ဓါတ်လှေကားထဲကို ဝင်လိုက်ပါ… ပြီးရင် ကိုယ်သွားရမယ့် အထပ်ထိ အထပ်တိုင်းရဲ့ ခလုတ်ကို အကုန်နှိပ်လိုက်ပါ… ဥပမာ ကိုယ်သွားရမယ့်အထပ်က ၉ လွှာဆိုရင် ၁ကနေ ၉ အထိ အကုန်နှိပ်ထားလိုက်ပါ… အထပ်တိုင်းမှာ ရပ်မယ့် ပွင့်မယ့် ဓါတ်လှေကားထဲမှာ သင့်ကိုဘယ်သူကမှ တစုံတရာ ထိခိုက်အောင် ပြုလုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး….
၂။ ။ မိမိတစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ ရှိနေစဉ် လူစိမ်းတစ်ဦးဝင်လာပြီး ကိုယ့်ကို တစုံတရာ ဒုက္ခပေးဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်…
ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ မီးဖိုထဲကိုပြေးပါ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငြုတ်သီးမှုန့် ဘယ်မှာထားတယ်… ဓါးကဘယ်နေရာမှာ ထားတယ်ဆိုတာကို သင်က လူစိမ်းထက်ပိုသိလို့ပါပဲ… ဒီပစ္စည်းတွေက လူတစ်ယောက်ကို ထိထိရောက်ရောက် တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ လက်နက်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိကိုယ်ကို ခုခံနိုင်အောင် အခွင့်အရေးများစွာ ရစေမှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ… ဒါမှမဟုတ် အိုးခွက်ပန်းကန်တွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းဖို့ အချိန်တစ်ခု ရစေနိုင်ပါတယ်… သင့်ရဲ့အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းသံဟာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ဝင်လာသူ ဒုစရိုက်သားတွေ အတွက် အကြောက်ဆုံးအရာ တစ်ခုဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့…
၃။ ။ ညအချိန်မတော် တစ်ယောက်တည်း Taxi စီးရဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ရင်…
လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ ကားထဲကို မဝင်ခင် ကားနံပတ်ကို မှတ်သားထားပါ… ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်း တစ်ဦးဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး မိမိ ဘယ်ကားနံပတ်၊ ဘာကားအရောင်နဲ့ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာကနေ Taxi စီးလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကားဒရိုင်ဘာ နားလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ဖုန်းပြောပါ… တကယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖုန်းခေါ်လို့ မရလည်း ဖုန်းဆက်လို့ ရတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဟန်ဆောင် ပြောပါ… ကားဒရိုင်ဘာဟာ သူ့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို နောက်ထပ်သိတဲ့ လူတစ်ဦးဦးရှိနေကြောင်း သိနေတဲ့အတွက် မကောင်းမှု တစုံတခု လုပ်ဖို့အတော်ဝန်လေးသွားပါလိမ့်မယ်… သင့်ကို မကောင်းတာ တခုခုလုပ်ရင် သူ့မှာလည်း ဒုက္ခရောက်နိုင်တာကြောင့် သင့်သွားလိုတဲ့နေရာကိုသာ တန်းတန်းမတ်မတ် ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်… ဒီလိုနည်းနဲ့ Potential Attacker တစ်ယောက်က သင့်ရဲ့ Protector တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်…
၄။ ။ အကယ်၍ Taxi Driver က လူရှင်းတဲ့လမ်း သို့မဟုတ် သင်သွားမယ့် နေရာနဲ့ မဆိုင်တဲ့လမ်း ထဲကိုမောင်းဝင်သွားခဲ့ရင်… သင်အန္တရာယ် ဧရိယာထဲရောက်ရှိနေပြီလို့ ခံစားရရင်…
လေ့လာတွေ့ရှိမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ သင့်လက်ကိုင်အိတ်ရဲ့ လက်ကိုင် သို့မဟုတ် လည်ပင်းမှာပတ်တဲ့ ပဝါအရှည်ကို အသုံးပြုပြီး ကားမောင်းသူရဲ့ လည်ပင်းကို နောက်ကနေ ရစ်ပြီး ခပ်တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်ပါ… သင့်မှာ လက်ကိုင်အိတ်ရော ပဝါရှည်လို လည်ပင်းကို ရစ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုမှ မပါရင်တော့ ကားမောင်းသူရဲ့ အင်္ကျီကော်လံနှစ်ဖက်ကနေကိုင်ပြီး ခုံနောက်ကနေ တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်ပါ… အင်္ကျီအပေါ်ဆုံး ကြယ်သီးက ခုနက ပစ္စည်းတွေလိုပဲ ကားမောင်းသူကို လည်ပင်းအစ်စေပြီး သင့်ကို အန္တရာယ်က လွတ်ဖို့ အခွင့်အရေးတခုခု ရရှိစေနိုင်ပါတယ်…
၅။ ။ ညအချိန် တစ်ယောက်ယောက် နောက်ကနေ လိုက်ခြင်းခံရရင်…
ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ အဆိုအရ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဒါမှမဟုတ် အိမ်တစ်အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ… သင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲကို ရှင်းပြပြီး အကူအညီရယူပါ… ညဥ့်နက်လို့ ဆိုင်တွေလည်း မဖွင့်၊ အိမ်ထဲလဲ ဝင်ဖို့ မလွယ်ကူရင် ATM စက်ခန်းထဲကို ဝင်လိုက်ပါ… ATM box တွေတိုင်းလိုလို လုံခြုံရေး Camera တပ်ဆင်ထားပြီး၊ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ လုံခြုံရေးအမြဲရှိနေတတ်တဲ့ အတွက်ပါပဲ… လူသိမခံလိုတဲ့ ဒုစရိုက်သမားတွေအတွက် ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းများဟာ သင့်အတွက် လုံခြုံမှုဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီစာလေးကို တွေ့မိဖတ်မိတဲ့အခါ မိန်းကလေးများအတွက် အမှန်တကယ်
အသုံးဝင်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘာသာပြန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်…
သင်လည်း သင်ဂရုစိုက်တဲ့ အစ်မ၊ ညီမ၊ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးများအတွက် ပြန်လည်လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးကြပါ လို့လေးစားစွာ တိုက်တွန်းတင်ပြရင်း…
မုံရွာ မေ ၂၆
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့ လယ်တီရပ်ကွက် လယ်တီ စာသင်တိုက်ဝင်းအတွင်းရှိ သီဟရာဇာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်၏ ယာဘက်မျက်စိတစ်ဖက်ပွင့်သဖြင့် အဆိုပါဘုရားသို့ ပြည်သူများမှ လာရောက်ဖူးမြော်သူများဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
'' ဒီစေတီတော်မြတ်ကြီးကို ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ စုပေါင်း အလှူခံပြီးတည်ထားခဲ့တာပါ။ ဒေါ်ပိုင်မိသားစုက သီဟရာဇာ မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်ကို မန္တလေးမြို့ ကျောက်ဆစ်တန်းကနေ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၁၃ ခုနှစ်မှာ ပင့်ဆောင်ပူဇော်ခဲ့တာပါ။ စေတီရဲ့ အမည်နာမကိုတော့လယ်တီစာသင်တိုက်ဝင်းအတွင်းမှာ ရှိတာရယ်၊ လယ်တီဆရာတော်ဘုရားနေ့နံကိုယူပြီး သီဟရာဇာဘုရားလို့ပေးခဲ့ တယ်။ မျက်စိတော်ဖွင့်တာကိုလဲ ယခုလ ၁၇ ရက် (ကဆုန်လပြည့် နေ့)မှာစသိတာ၊ တစ်ယောက်စကား၊ တစ်ယောက်နားနဲ့အသိများ လာပြီး လာကြည့်တဲ့သူတွေများလာတာပါ''ဟု အဆိုပါ ဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရှင်းပြသည်။
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်) ကျောင်းသားတစ်ဦး လူတစ်စုက မှားယွင်းရိုက်နှက်ခံရပြီး ရဲကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရခြင်း
Posted by drmyochit Wednesday, May 28, 2014, under မှုခင်း | No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အင်တော်မြို့နယ် နန့်စီးအောင် ကျေးရွာနေ မောင်အောင်ဇင်ဖြိုး ဒုတိယနှစ်(ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) ကျောင်းသားသည် 25.5.2014(တနင်္ဂနွေနေ့)ညပိုင်းတွင် ဗန်းမော်မြို့ ထဲကဂ်ိမ်းဆိုင်မှအပြန် (2-မိုင် အောင်သာကျေးရွာအနီး )ဘီးခွန်ဂိတ်နားတွင် သူတို့ စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုတားပြီး လူတစ်စုက ၀ိုင်းရိုက်တာ ခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ရိုက်တဲ့လူစုမှာလည်း ရိုက်ပြီးနောက်မှ လူမှားရိုက်မိကြောင်းသိပြီး ရှောင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်တော့ မောင်အောင်ဇင်ဖြိုးက ထွက်ပြေးပြီးခြုံထဲမှာ ပုန်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့အန္တရယ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အုတ်ခဲကိုကိုင်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အနားကို လူနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးသူ့ကို ချုပ်ကိုင်တော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ပြန်ခုခံဖို့ ကြိုစားမိတယ်။ အဲဒီလူနှစ်ယောက်က အရပ်ဝတ် ရဲသားနှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ကိုလက်ထိပ်ခတ် ဖမ်းဆီးပြီး ရဲစခန်းကို ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲစခန်းကို ရောက်တော့ မင်းဘယ်အဖွဲ့ကလဲ ဘာလဲ မေးပြီး ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသာပါလို့ ပြောတော့ ဖိနပ်နဲ့ရိုက်ခံရတယ်။ နောက်ထပ်မေးလိုက်ရိုက်လိုက်လုပ်ပြီး ကျောင်းသားလေးက ဘာမှရှင်းပြလို့မရအောင် အနှိပ်စက်ခံလိုက်ရတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းကျောင်းသားတွေ ရဲစခန်းကိုလိုက်ပြီးသွားတွေ့တော့ အတွေ့မခံဘူး မင်းတို့ သူငယ်ချင်း အိပ်နေတာလို့ပြောပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ကြောင်း ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)က ကျောင်းဆရာ တဦးက ရှင်းပြပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေက ဆရာမတွေကိုသွားပြောပြတော့ ဆရာမတွေက သိသွားပြီးရဲစခန်းကိုလိုက်သွားပြီးကလေးကို ထုတ်ခဲ့တာ။ ဆေးရုံ(အပြင်ဆေးခန်း)ကိုတော့ ရဲတွေကလိုက်လာပြီး ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ဒဏ်ရာရတာဆိုပြီး ဇွတ်ပြောတယ်တဲ့။ ကျောင်းကလည်း သက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲက တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိပဲ ၊ ကလေးကို သနားတဲ့ဆရာမများက သက်သက် ကူညီရုံပဲရှိနေတာဖြစ်လို့ ထိရောက်သော တရားနည်းလမ်းလေးနဲ့ ဖြေရှင်းစေလိုပါတယ်။ကျောင်းသားလေးရဲ့ ခြေထောက်က အရိုးများအက်နေပြီး သွေးများစိမ့်ထွက်လျက်ရှိနေကြောင်း အဆိုပါ ကျောင်းဆရာက ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပါတ်သတ်လို့သစ်ထူးလွင် ကို ရှင်းလင်းပြောဆိုထားပါတယ်။
From: THIT HTOO LWIN
မှားယွင်းရိုက်နှက်ခံရပြီး ရဲကဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတဲ့ မောင်အောင်ဇင်ဖြိုး
ဆေးရုံ(အပြင်ဆေးခန်း)မှ ဓါတ်မှန် ဆေးစစ်ချက်
မောင်အောင်ဇင်ဖြိုး ကျောင်းတက်နေတဲ့ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်)
သျှမ်း/အရှေ့ မြို့တော် ကျိုင်းတုံတွင်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျ
မေလ ၂၇ ရက် ၂၀၁၄
မေလ ၂၇ ရက် ညနေ ၃ နာရီကစ၍ သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံမြို့တွင် လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ရာ နေအိမ်များ ပြိုကျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့ကြောင်း ကျိုင်းတုံဒေသခံများကပြောသည်။
“ ညနေ ၃ နာရီခွဲကစပြီး လေဝင်တယ်။ တနာရီကျော်ကျော်လောက် လေရော မိုးရော ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကျတယ်။ မြို့တွင်းရပ်ကွက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုများတယ်။ မြို့ပြင်ကျေးလက်က အဲလောက်မဟုတ်ဘူး။ စွမ်ဆတ် တောင်အတက်လမ်းမှာရှိတဲ့ ကျိန်းခုမ်ရပ်ကွက်မှာအိမ်ပြိုတာရှိတယ်။ အိမ်ခေါင်မိုးတွေ လေနဲ့လွင့်ပါသွားတာရှိတယ်။ နွဲ့နော ရပ်ကွက်မှာ သက်တမ်းရင့်ညောင်ပင်ကြီး ကျိုးတယ်။ လူတော့ သေကြေထိခိုက်မှုမရှိပါဘူး” ဟု ကျိုင်းတုံမြို့ခံ စိုင်းဆာမ်က သျှမ်းသံတော်ဆင့် အား ပြောသည်။
ယနေ့လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်စဉ် မိုးသီးကြွေကျမှုမရှိကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီးတိုင်များကျိုးကျ ပျက်စီးသဖြင့် တညလုံးမီးပြတ်တောက် နေကြောင်းလည်း ဆိုပါသည်။
မြို့တွင်းလမ်းမများပေါ်တွင် ဒူးခေါင်းအထိ ရေများလွှမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း စိုင်းဆာမ်က ပြောပါသည်။
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၏ မြို့တော်ဖြစ်သော ကျိုင်းတုံမြို့သည် ယခင်က စိမ်းလန်းသာယာဆုံးမြို့တမြို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် သဘာဝ ပျက်စီးမှု သစ်တောပြုန်းတီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ၄-၅ နှစ် အတွင်း သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ အဆက်အပြတ် ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရကြောင်း ယမန်နှစ်ကလည်း တောင်ကျ ချောင်း ရေ ကြောင့် မြို့တွင်းရေလွှမ်းကာ မြို့ပြင်လယ်ယာမြေဧကပေါင်းမြောက်များစွာ ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မြတ်နိုးသူ ကျိုင်းတုံမြို့ခံ လူငယ်များကပြောသည်။
လေပြင်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသော ကျိုင်းတုံမြို့အပျက်အစီးတချို့ (ဓါတ်ပုံ- ကျိုင်းတုံချစ်မြတ်နိုးသူများ ဖေ့စ်ဘုခ်မှ)
အကယ်ဒမီ ဗန်းကိုင်မှ တစ်ဆင့် အနုပညာလောက ထဲခြေလှမ်း လှမ်းလာသူ တွေထဲမှာ သက်သခင် လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အနုပညာကို တန်ဖိုးထား ဝါသနာ ပါတဲ့အ တွက် အနုပညာ လောကထဲ ဝင်ရောက်လာ ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သက်သခင်က “သက်သခင် ဒီအနုပညာကို ဝါသနာ ပါလွန်းလို့သာ လုပ်တဲ့ အတွက် အောင်မြင် မှု တစ်ခု ရရင်ပဲ ကျေနပ် တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ အခါ နဲ့ ကြုံခဲ့ရင် ခံနိုင်ရည် ရှိအောင်တော့ လေ့ကျင့် ရတာပေါ့။ လွယ်လွယ် လေး နဲ့ရတဲ့ အရာ တစ်ခုက မတည်မြဲဘူး။ ဒါကို နားလည် ရမယ်။ ပေးဆပ်ရ မယ်။ အောင်မြင်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူး ဆိုတာထက် လူအများ အကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်တဲ့ လူဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီထက်ကြိုး စားရဦးမယ်။ ဒီမှာ ရပ်မနေဘဲ ဆက်ကြိုးစားဖို့က ကိုယ့်တာဝန်ပါ။ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ကြိုးစားဖို့တော့ လိုတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ အပျိုရံ၊ ဗန်းကိုင် အဖြစ် အမြဲတွေ့တဲ့ သက်သခင်ကို ၁၅ဝဝ မေတ္တာနဲ့ ၅၂၈ မေတ္တာအပေါ် ခံစားမှု အတိမ် အနက် အပြင် ချစ်ရေးချစ်ရာ ကိစ္စ ကိုမေးကြည့်တော့ “အချစ်ရေး ကိစ္စဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ မင်္ဂလာ သတင်းကတော့ ကြာဦးမယ်။ အချစ်ကိစ္စ ဆိုရင် မဖွဲ့ဆိုတတ် ဘူး။ ၁၅ဝဝ က သက်သခင် အတွက် စိတ်ရှုပ်စရာ ကောင်းတဲ့အရာလို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပာယ် မဖွဲ့ဆိုတတ်ဘူး။ ၅၂၈ ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အေးချမ်းတယ်။ မိ သားစု နဲ့ရော၊ ပရိသတ်တွေပေးတဲ့ အချစ်ရော ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
သက်သခင်ရဲ့ဘဝ လက်တွဲဖော်ကို ရွေးချယ်တဲ့ အခါ ဘယ်လိုပုံစံကို အဓိက ရွေးချယ်ဖြစ် မှာလဲလို့ မေးကြည့်တော့ “ဘဝနဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုတော့ ကံတရားပါပဲ။ ကြိုတင်ပြောလို့ မရပါဘူး။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရွေးချယ်ခဲ့ရင် အနုပညာလောက ထဲက ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ အပြင်က လူလည်းဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်။ ကြိုမသိနိုင်တဲ့ ကံလို့ ပဲပြောရမယ်။ သက်သခင်လို ချင်တဲ့ ပုံစံ ကတော့ အကျင့် စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ့်အပေါ် ချစ်ပြီး နားလည် ခွင့်လွှတ်ရမယ်။ ဒါဆို ကျေနပ်ပြီ”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီး ဆွေမျိုးများသဘော မတူသည့် လူနှင့်လက်ထပ် မိလို့ အသတ်ခံရ
အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ပြစ်မှုတစ်ခုကို မေလ ၂၇ရက်၊ လဟောမြို ၊ ပါကစ်စတန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကို World Myanmar မှအနီးစပ်ဆုံး ဘာသာပြန်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသူအမျိုးသမီး တစ်ဦးသည် မိမိနှင့်လက်ထပ်ထားသူ အမျိုးသားအားမိဘများက သဘောမတူသဖြင့် သူမ၏ယောကျာင်္းအား သွေးဆောင်ဖျားယောင်သူဟုတရားစွဲဆိုထား သဖြင့်တရားရုံး သို့ ရင်ဆိုင်ရန် အသွားသူ မ၏ မိဘများနှင့်ဆွေ မျိုးများက မသေမချင်းကျောက် တုန်းဖြင့်ထုသတ် သဖြင့် အသက်သေဆုံးခဲ့ရသည်။ အဆိုပါမှုခင်း ကိုမြို့ လယ်ခေါင် တရားရုံး၏အ ပြင်ဖက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သတ်၍သေဆုံးသူ၏ဖခင်အားချက်ချင်းဖမ်းဆီးပြီး ပါဝင် ပတ်သတ်သူများအား ဆက်လက် ဖမ်းဆီးရန်ပြုလုပ်နေသည်။ နှစ်စဉ်အလားတူဖြစ်ရပ် များစွာရှိသော်ငြားလည်း လူမြင်ကွင်းတွင်ကျောက်တုန်းဖြင့်ထုသတ်သည်မှာ အလွန်ပင်ရှားပါးလှသည်။ သူမသည် အသက် ၂၅နှစ်အရွယ် ဖာဇာနာ ပါဗင်ဖြစ်ပြီး သူနှင့်လက်ထပ်ထားသူအမျိုးသားမှာ အသက်၄၅နှစ်အရွယ် မိုဟာမတ်ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူမှာတော့ မိသားစုအားအရှက်သိက္ခာရအောင်ပြုလုပ်သောကြောင့် သတ်ရသည်ဟုထွက်ဆိုခဲ့သည်။
ကျောင်းသားများ ရည်းစားမထားရ အခြေခံကျောင်းများတွင် ...
လက်ဖြင့် လိင်ဖျော်ဖြေမှု လွန်ကဲ၍ ဘရာဇီးလ် ဆယ်ကျော်သ...
ဂီတအလုပ်တွေအပြင် MRTV 4က ရိုက်မဲ့ Musical Drama ဇာ...
စဉ့်ကိုင်မှာ အလုပ်သမား ၆၀၀ ကို အလုပ်ပြန်ခန့်ပေးဖို...
ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်(ဗန်းမော်) ကျောင်းသားတစ်ဦး လူတစ...
ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီး ဆွေမျိုးများသဘော မတူသည့် လူန...